'Furiosa, fametrahana' Mad Max ', hanomboka hanatontosa sary any New South Wales
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Furiosa, fametrahana' 'Mad Max', natomboka hanombohana naka sary ao New South Wales
'Furiosa, fametrahana' 'Mad Max', natomboka hanombohana naka sary ao New South Wales
by Waylon Jordan Aprily 19, 2021
tezitra, Vaovao Mad Max tantara momba ny sarimihetsika sy ny fiavian'ilay olo-malaza malaza avy Mad Max: Fury Road, dia eo am-piomanana farany hanombohana ny fandefasana horonantsary any New South Wales, Aostralia. Ity horonantsary ity dia voalaza fa ho ny lehibe indrindra natao teto Aostralia.
Anya Taylor-Joy (Ny Mutants Vaovao, The Witch) dia handray ny anjara toeran'ny titular mifanohitra amin'i Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok). Hemsworth dia niseho niaraka tamin'ny mpamorona franchise George Miller tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany mba hiresaka momba ny drafitra momba ilay tetikasa izay efa natomboka ny 23 Jona 2023.
Ilay horonantsary dia voalaza fa hampiditra 350 tapitrisa $ any an-toerana ary hamorona toerana manodidina ny asa 850.
Mad Max: Fury Road dia sarimihetsika kintana iray nahazo 370 tapitrisa dolara eran-tany, ary ity toko manaraka andrasana ity dia afaka nanao an'izany sy maro hafa. Charlize Theron amin'ny maha Imperator Furiosa dia iray amin'ireo olo-malaza nisongadina tamin'io sarimihetsika io, ary hahaliana ny mianatra ny momba azy.
Ny talen'ny gazety dia nanamarika tamin'ny mpanao gazety fa ny fitoniana ao amin'ny Warner Bros no lakilen'ny fivoaran'ny tetikasa.
“Hatramin'ny nanombohantsika Fury Road Heveriko fa efa nisy fitondrana enina samihafa tao Warner Bros, ”hoy izy. “Milamina tsara izao ary afaka mifantoka tsara amin'ny sarimihetsika tian'izy ireo hatao izy ireo ary iray amin'izany.”
Vonona handray toko iray hafa ve ianao ao amin'ny Mad Max saga? Te hahafantatra bebe kokoa momba tezitra? Araho hatrany ny iHorror ho an'ny vaovao farany rehefa misy!
Anya Taylor-JoyChris HemsworthtezitraGeorge millerMad MaxWaylon Jordan
Famerenana: 'Zazalahy avy any amin'ny helo County' dia nanangana ny tsatoka tamin'ny alàlan'ny vampira vaovao
Fitiavana, Fahafatesana + Robots Volume 2 Trailer eto no hitsoka ny sainao